HARARE, ZIMBABWE — Two political parties in Zimbabwe have endorsed Prime Minister Morgan Tsvangirai for president. The parties have promised a unity government after the elections set for July 31.
So it is "game on" in Zimbabwe’s elections, but the treasury does not yet have the estimated $132 million needed to fund the polls.
Zimbabwe Finance Minister Tendai Biti said Mugabe has to push for diamond-mining companies to release proceeds of the sales of their precious stone if the African country is to have funds for the polls.
The polls will mark the end of the power-sharing government that Mugabe and Tsvangirai formed after the disputed 2008 elections.
Mugabe claimed victory in the second round, but African leaders called unacceptable the violence that claimed the lives of about 200 Tsvangirai supporters.
South Africa Asks US to Ease Zimbabwe Sanctions